Ukuze aqhubeke inani ukulawula izindleko, MTS linikeza amakhasimende ayo izinkonzo eziningi ezifanele namathuluzi. Ngosizo lwabo, ungakwazi njalo uhlale usesikhathini yini imali yokukhokhela zokuxhumana kanye nezinye value added amasevisi. Ukuze amakhasimende usebenzisa imali plan "Mayak", nayo inikeze ithuba lokwenza ukubuka ulwazi mayelana balance of enye inkampani MTS zokubhalisa nge-USSD-isicelo. Mayelana kanjani ungenza ukulawula MTS kokuchitha yini intengo amasevisi afana nemibandela yabo ukusetshenziswa izochazwa lesi sihloko.
Nikeza ulwazi okufika ngesikhathi mayelana nokusebenza izindleko ucingo, noma nezinye izenzo esaholela ukwesulwa ethile kusukela akhawunti
Uma kungaba nesithakazelo ngemva isinyathelo ozenzayo udaba, ucacise inani layo ngaphandle kokubuka ulwazi ecebeni tariff, isevisi "Balance ngaphansi kolawulo" ngokuqinisekile ezikufanelayo. Ngosizo lwawo, ngemva kokuhlinzwa ngamunye wenziwa egumbini Uzoxwayiswa ukubaluleka kwayo. imiyalezo enjalo kungukuthi egcinwe efonini, e evamile kwesigaba "SMS" futhi zingezesikhashana. Izindleko ezinjalo "injabulo" - amasenti ayishumi ngosuku.
MTS ukulawula Inthanethi izindleko
For mobile abasebenzisa i-Internet, kungakhathaliseki ukuthi hlobo idivayisi kulo ixhunyiwe, hlola idatha traffic asele ngezindlela ezilandelayo:
ngokusebenzisa ikamelo siqu le-Web (noma okulingana ukusebenza isicelo yezinto zobuchwepheshe mobile);
nge-USSD ukusebenza (kulesi simo, uma traffic isetshenziswa ngaphakathi imali plan yakho, zamanje Ngiyocela uhlobo * 100 * 1 # izinketho nokhunye Inthanethi kufanele usebenzise inhlanganisela * 100 * 2 # noma * 111 * 217 #.
Esimweni sokuqala, ulwazi mayelana ingakanani i-traffic ladliwa, lubonakaliswa ngesigaba, wesibili web-interface - ngizoya embikweni wombhalo.
Ithola nezifinyezo izindleko usuku
Daily MTS ababhalisile mahhala Ungathola ulwazi mayelana yimalini kunoma iyiphi isevisi esetshenzisiwe. Yiqiniso, balindele umbiko enemininingwane akuyona: service izinhlobo eqoqelwe ndawonye futhi wabonisa Kubiza kosuku: isibonelo, umlayezo we-SMS - ruble 6.00; Inthanethi 3G - ruble 36,20. Ngaphambili, inceku epha nezinye izimo eziningana: ungathumela isicelo futhi ukuthola izindleko izenzo ezinhlanu. Ukuze afeze ukulawula MTS ngale ndlela izindleko, inhlanganisela * 152 * 1 #. Njengoba kushiwo ngaphambili, zicelo mahhala kanye nezinombolo zabo akuyona esilinganiselwe.
Ukuqapha MTS kuzula izindleko
Ukuze nizibhale phansi izindleko ngaphandle esifundeni ngisho izwe, ungasebenzisa zonke izindlela ezifanayo ejwayelekile: ibhalansi isheke kwenziwa ngokusebenzisa * 100 #, ibhalansi isheke imizuzu, nezinye izinhlobo zokwelapha - ngokusebenzisa imibuzo kushiwo ngaphambili, i-akhawunti yomsebenzisi siqu (ezifana ngokusebenzisa esibonakalayo web, futhi nge isicelo ephathekayo) iyatholakala ngenkathi kwelinye izwe (ebukhoneni uxhumano lwe-Inthanethi, kuyinto efiselekayo ukusebenzisa inethiwekhi wireless, njengoba lokukhokhisa Inthanethi phesheya ngokwanele ezinkulu).
Buka akhawunti lekhombisa sikweleti ngasinye
Uma ufuna ukubuka kokulotshiwe okuphelele amakholi wefoni futhi uthole hhayi kuphela izindleko kokushaya noma ukusebenza ehlukile, kodwa futhi obhalisile noma isevisi inombolo, ngenhlonipho lapho sesifeziwe phandle, kutuswa ukusebenzisa sokuprakthiza. Thola kungaba ngokuxhumana gumbi opharetha noma ngokuvakashela Amalungu Area (MTS). isilawuli Izindleko, ukuthola ulwazi mayelana izinkokhelo, ongakhetha yasebenza futhi uhlu lwamakheli - lokhu kuyinto uhlu akuphelele izici ayatholakala kwi-website (noma kuhlelo lokusebenza lweselula).
"Amaphesenti angu-20 ukubuya," MTS. Imigomo, ukubuyekezwa. Indlela ukuxhuma "amaphesenti angu-20 emuva" MTS?